Amazwi Ka-Ephreli | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ephreli. Inyanga yokuqhuma kwentwasahlobo. Izimbali ziyavela, izihlahla zimbozwe ngamaqabunga, futhi kancane kancane amakhaza neqhwa kusala ngemuva. Izinyoni zicula ngokujabula njengoba izinambuzane ziqhubeka nemisebenzi yazo ngaphansi kwesibhakabhaka okungakhohlisa kakhulu kwesinye isikhathi.
Njengoba nje ilanga liphuma phezulu emkhathizwe njalo ekuseni, amafu angalimboza ngemizuzu nje embalwa, abangele ukuba izinga lokushisa lehle. Kepha, Zisitshelani izisho zika-Ephreli ngesimo sezulu?
1 Unjani u-Ephreli eSpain?
2 Amazwi ka-Ephreli
Unjani u-Ephreli eSpain?
Izimbali ze-alimondi eLa Quinta de Los Molinos (Madrid)
Spanish uMbasa it has lokushisa isilinganiso 13 degrees centigrade. Enyakatho yenhlonhlo nasezintabeni eziphakeme kunawo wonke amakhaza ehla aze afike ku - 8ºC, kanti kokunye i-mercury ivame ukuba ngaphezu kuka-20ºC, ikakhulukazi esifundeni saseMedithera.
Uma sikhuluma ngemvula, imvula emaphakathi ingu-92mm, egxila ikakhulukazi engxenyeni esenyakatho-ntshonalanga yenhlonhlo. E-Canary Islands kuvamise ukuba yinyanga eyomile, kanye naseMedithera.
Ukufika kuka-Ephreli kuyintwasahlobo; ubisi nokuguqulwa kwegazi: yisikhathi lapho impilo ivuka kabusha. Umsebenzi ojwayelekile wamasimu namahlathi uyabuya. Futhi yisikhathi sokukhwelana kwezilwane eziningi.
Ngo-Ephreli, usika ikhakhasi futhi ukhule inkulungwane: ngokwanda kwezinga lokushisa namahora okukhanya kwelanga, amakhambi akhula ngesilinganiso esimangazayo, kuze kufike ezingeni lokuthi yize ukusikeka, ngesikhathi esifushane kuzophuma futhi, hhayi okukodwa, kodwa okuningi okuningi.
Ngo-Ephreli, incithakalo kuphela engakwazi: Uma imifino iphuma ebusika, ushukela uyakhuphuka, ngakho-ke uma ithenwa manje ingozi yokuyilahla iphezulu kakhulu, ngoba ngenxeba ngalinye lingalahlekelwa isisi esiningi.
KwiSan Marcos, kuzoba nodaka phansiUsuku lukaSanta ngu-Ephreli 25, usuku lapho imvula ivame kakhulu.
Ubusika abukadluli kuze kuphele u-Ephreli: Iqiniso. Njengoba sishilo ngaphambili, u-Ephreli uyinyanga ekhohlisayo. Ngakho-ke kunconywa ukuthi ungazigcini zonke izingubo zakho ezifudumele kuze kufike uMeyi, uma kungenzeka.
Ngo-Ephreli iqhwa lilandela isichotho: lapho ingaphambili elibandayo lingena, umkhathi uba ongazinzile futhi kwakhiwa amafu wokuthuthuka okukhulu mpo abangela isichotho; ngokuhamba kwesikhathi, umoya uzinza futhi izinga lokushisa liyehla, kushiye isibhakabhaka singenamafu, okuyilapho kuvela khona isithwathwa. Ukugwema ukulahleka engadini, kungakuhle ukuthi unake izibikezelo zezulu ukuze ukwazi ukuvikela izitshalo uma kwenzeka kuba nesichotho.
Ephreli Ephreli, noma umalusi acele umshayeli wesikebhe usizo noma amasele afele emhlabathini owomile: Le nyanga ingaba nemvula enkulu noma yomile kakhulu. Ngokuvamile akukho ndawo ephakathi nendawo.
U-Ephreli olana imvula wenza uMeyi omuhle: futhi kuyiqiniso. Uma lina kule nyanga kuqinisekile ukuthi uMeyi uzoba muhle kakhulu, ngoba izitshalo zizokwazi ukukhula kangcono kakhulu, ukuze amasimu nezingadi kubukeke kumangalisa.
Ephreli, yebo kuhle ekuqaleni, kubi ekugcineni: abalimi besaba ukuthi uma siqala inyanga yesine yonyaka ngonyawo lwesokudla, sizoyiphetha kabi. Futhi yilokho kanye okungenzeka: sinezinsuku eziyi-10 noma eziyi-15 ezinhle kakhulu noma ezimbi kakhulu, kanti ezinye ziphambene.
Uma liduma ngo-Ephreli, lungisa ikapa bese uyolala: futhi uma uwuthanda umsindo wezivunguvungu, cishe uzolala kangcono ngalolo suku; noma ukuthi uncamela ukuncika ngewindi ukuze uyibone. Noma kunjalo, yebo, ungakhohlwa ijazi ngoba lizobanda.
Kwaduma u-Ephreli, ihlobo elihle liyeza: uma kuneziphepho phakathi nenyanga ka-Ephreli, sizoba nehlobo elilula lokuthwala.
U-Ephreli emamatheka, amakhaza abulala abantu: Izulu lingakhanya, kepha umoya ovunguzayo kwesinye isikhathi uyabanda. Ngakho-ke phakathi nale nyanga singajabulela izinsuku ezithile zesimo sezulu esihle namazinga okushisa amnandi, kepha uma kufika isikhathi lapho sicabanga ukuthi ngeke kubanda, akufanele sizethembe.
Ephreli Ephreli, nsuku zonke izihlambi ezimbili: ayikho indawo ephakathi. Noma isomiso, noma izimvula ezinkulu. Kwezinye izingxenye zezwe lingana kakhulu ngezikhathi ezithile.
Ngo-Ephreli i-asparagus kimi, ngoMeyi ngehhashi lami: uma ungomunye walabo abakuthokozelayo ukukhetha i-asparagus, yisebenzise ngoMashi-Ephreli, ngoba ngoMeyi bazoba nzima kakhulu ukuthi bangadliwa.
Ngo-Ephreli lina kakhulu: ngesinye sezisho ezaziwa kakhulu. Kwezinye izingxenye zezwe imvula iba njalo; ngeshwa, kwezinye azikho nhlobo.
U-Ephreli, u-Apriloso kanye namanzi ayo bakhipha ibhere emhumeni: ngokufika kwezimvula, ibhere lishiya umhume walo lizokondla ngemuva kokuchitha ubusika liphumule.
Ingabe zikhona ezinye izisho zango-Ephreli ozaziyo?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Amazwi ka-Ephreli